के प्रत्येक व्यक्ति स्मार्ट बनाउँछ? सायद तपाईं मेरो टाउको मा तथ्य को एक काल्पनिक रकम राख्न एक अद्वितीय क्षमता छ वा एक उच्च बुद्धि छ जसले कसैले हुन्? तथापि, केही मानिसहरू यसको आवश्यकता छैन। तिनीहरूले महत्वपूर्ण क्षणमा निर्णयहरू मा असाधारण बुद्धि आफ्नो कारण ले, वा सबैभन्दा साधारण अवस्थामा देखि अधिकतम लाभ निकाल्न।
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, शब्द "बुद्धिमान मानिस" कुनै एकल उपाय छ। एक व्यक्ति विभिन्न विकल्प उपलब्ध संयोजन व्यवहारमा उतार्ने र expertly घटना प्रत्याशा मौका छ जब कहिलेकाहीं यो अवधारणा राम्ररी शब्द "सफल" संग intertwined छ, उहाँले समृद्ध बन्न निश्चित छ। एक सूत्र छ तपाईं सफलता को रहस्य मा, देख्न सक्नुहुन्छ, यो प्रत्येक व्यक्तिको लागि फरक छ। के तपाईं साँच्चै सफल हुन चाहनुहुन्छ भने त, यो स्मार्ट मान्छे कहिल्यै गर्नेछ ती कुराहरू बारे कुरा गर्न उचित छ। यी सबै नकारात्मक कुरा गरेर तपाईं पारित गर्न सक्छ भने, अरू सबै कुरा आफैमा पालन गर्नेछन्।
सुरक्षित गर्न मौका बेवास्ता नगर्नुहोस्
तपाईं धनी मान्छे मात्र केही गर्न तर आफ्नो भाग्य खर्च लाग्छ भने, तपाईंले गहिरो गलत छन्। हुन कि शक्तिहरु लगनशील भई प्रत्येक कमाएका रुबल, डलर वा यूरो लागू हुन्छ। तथापि, अर्थव्यवस्था को कुरा मा राम्रो प्रूडेंस को सिद्धान्त प्रयोग र अन्य चरम जाने छैन। बचत लोभ वा avarice मा गर्नाले, कुल हुँदैन।
आफ्नै आर्थिक नियन्त्रण गर्न, अनियोजित र अनावश्यक खर्च आफैलाई छुटकारा पर्याप्त। तपाईं मान्छे व्यर्थ खर्च मा कति पैसा खर्च जान्न छक्क हुनेछ। सेवाहरूको प्रकारको लागि दुई पटक भुक्तानी गर्न पनि सिक्न। बरु, पूर्ण छ भनेर ती लागू। त्यसैले, उदाहरणका लागि, उच्च गतिको इन्टरनेट संग, तपाईं सजिलै केबल टेलिभिजन दिन अप गर्न सक्नुहुन्छ।
अरूलाई भर छैन
निस्सन्देह, हामी प्रत्येकले तपाईं कठिन समयमा भरोसा गर्न सक्छन् भएको मान्छे, नजिक हुन आवश्यक छ। तथापि, अरूको राय सुन्न धेरै fraught छ। यो पूर्ण आफ्नै सेना को एक व्यक्ति deprives। बुद्धिमान् मानिस ऊर्जा कहिल्यै छरिएका। अर्को शब्दमा, पर्याप्त एक शानदार मन र जन्मबाट प्राप्त समाचार छ। तपाईं अभ्यास मा कसरी यो सबै जान्नु आवश्यक छ।
को अयोग्य र डाह सलाहकारहरु छोड्न र एक पटक अरूको राय फेरि सुन्न छैन। के तपाईं मदत चाहिन्छ महसुस भने पनि तपाईं पहिले विभिन्न कोणबाट अवस्था हेर्न। आफ्नो समस्या साँच्चै अघुलनशील छ भने मात्र विदेशी व्यक्ति को सेवाहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
irresponsibly कार्य छैन
समय समयमा स्मार्ट मान्छे आफूलाई स्थिति यो आवश्यक छ, तिनीहरूले ठट्टा र मजा थिए आराम गर्न अनुमति दिन्छ। तथापि, तिनीहरूले सधैं भन्ने पातलो लाइन जो परे तपाईं पार गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ छैन थाहा छ। Irresponsibility कुल permissiveness, promiscuity र संगठनको कमी implies। एक व्यक्ति प्रभावकारी हुन खोज्ने भने, यो ठीक अभिभावक संगठनको नियन्त्रण लिन्छ, र यसको जिम्मेवारी थाह छ। स्मार्ट मान्छे irresponsibility को अप्रिय परिस्थिति कसरी जोगिन थाहा छ।
आफ्नो निर्णय परिवर्तन वा विश्वास संशोधन गर्न नडराऊ
संसारको हाम्रो धारणा अपरिवर्तित रहन सक्दैन। अभिभावकको अनुशासन, शिक्षा, र विभिन्न जीवन परिस्थिति: प्रत्येक समय बिन्दुमा हामी विभिन्न बाह्य कारक सामना गर्दै हुनुहुन्छ। एक व्यक्ति को जीवन भर विश्वास, सिद्धान्त र मोडेल संसारको आफ्नै दृष्टि प्राप्त। यो हामी, reprioritize केही घटना पछि वर्ष गरौं गर्न सक्ने होइन। यो समयमा बाह्य कारक राम्ररी को मानव प्रभाव मा हुनेछ भने दृश्य को आफ्नो कुरा परिवर्तन गर्न सकिँदैन। यो अवस्था कमजोरी होइन पक्का बौद्धिक मानिस।
यो आवश्यक छैन आफ्नो असफलतामा बास छ
कहिलेकाहीं कुनै पनि विचार बिल्कुल कृति देखिन्छ, तर अन्य मानिसहरू यसलाई mediocre हेर्नुहोस्। खैर, कति मान्छे, यति धेरै त्यहाँ राय। तपाईं सबैलाई खुसी सक्दैन। यो soberly, स्थिति आकलन मा जाने विशेषज्ञता र साहस को रूप मा यो लाभ उठाउन त्यसैले आवश्यक छ। अपमान वा असजिलोपन चाँडै बित्दै। यो साँच्चै निराशा छ, तर यस्तो कुनै एक प्रतिरक्षा छ। र तपाईं गल्ती वा त्यो कार्य गरे पनि भने, छैन निरन्तर गर्न यसको लागि आफैलाई निन्दाले, र बन्द समय मेरो टाउको मा पहिले हावा। के छ फर्कन सक्दैन। स्क्राच देखि बस सुरु गर्नुहोस्। के तपाईं धेरै राम्रो प्राप्त, देख्नुहुनेछ।
विगतका लाइभ छैन
बुद्धिमानी मान्छे दुई पटक एक र एउटै नदी मा जाने छैन भन्छन्। राम्रो-भूल भूत, वर्तमान वास्तविक र अनिश्चित, तर एक उज्ज्वल भविष्य: तपाईं समय तीन भागमा विभाजन गरिएको छ भनी सिकाए गर्नुभएन? समय अक्ष अगाडी बढ्दै, हामी फिर्ता हेर्न उठयो गर्न सक्दैन। विशेष गरी, हामी त्यसो गर्न उठयो सक्दैन विगतको जीवन कुरा हामीलाई वा परेशान भन्दा हङ देखि। विगतका अनुभव लाभ ल्याउन सक्नुहुन्न भने, त्यसपछि सुरक्षित तवरले को overboard बेकारी गिट्टी रूपमा फ्याँक्नुहोस्।
कहिल्यै भाग्य मा केवल भर
वर्तमान चुनौतीहरू समाधान, स्मार्ट मान्छे सधैं सबै भन्दा राम्रो को लागि तर खराब लागि तयार आशा। हाम्रो प्रकाशन को धेरै सुरुमा हामी अगाडि घटनाहरू केही चाल पूर्वानुमान एक अद्वितीय मौका बारेमा कुरा। यो होइन कि जीवन हुनेछ केवल अप। सम्भव र आवश्यक छ, तर केवल दुर्लभ अवस्थामा भाग्य भर पर्छन्। हामी "शायद" भर खाए, तपाईं सजिलै banal आलस्य गर्न धकेल्न सक्नुहुन्छ। ठूलो मानिसहरू मात्र विधिपूर्वक मा भाग्य भर गर्न सल्लाह छन्। एक स्थायी armaments यो विधि लिन्छ व्यक्तिले बस बढ्दै रोक्छ।
विवरण बेवास्ता नगर्नुहोस्
समग्र सफलता अप सानो कुरा, विस्तृत बनेको छ। यो आफ्नै व्यवसाय को आचरण मा विशेष गरी महत्वपूर्ण कथन छ। राम्रो गुणस्तर उत्पादन पनि सिर्जना र सबै भन्दा कम मूल्य लागि उहाँलाई सोधेर, तपाईं अझै पनि प्रतियोगिहरु संग राख्न सक्नुहुन्छ। तसर्थ, ग्राहकहरु प्रभावित र तिनीहरूलाई विश्वस्त गर्न सबैभन्दा सराहना मौका उत्पादन बेच्न सक्ने क्षमता। यो महत्त्वपूर्ण कुरा को बस एक उदाहरण हो, तर त्यहाँ अरूलाई छन्। बस व्यवसाय योजना बनाउन र कारबाही।
आफ्नो गल्तीबाट सिक्न संकोच छैन
हामी सबै थाह छ, त्रुटिहरू देखि कसैले बीमा गरिएको छ। पूर्वाग्रहको फेंक टाढा र पूर्णता को मुकुट यसलाई तोड्ने। को योजना रणनीति गलत कुरा जान्छ र एक खाली गठन गरिएको छ भने, यो आफ्नो वाहन पक्कै तल जानेछ होइन। तपाईं यो अवस्था प्रत्याशा भने, तपाईं प्वाल प्याच गर्न सक्नुहुन्छ। मुख्य कुरा यो नियन्त्रणमा राख्न छ। र तपाईं आफ्नो गल्तीबाट सिक्न कसरी सिक्न भने, यस्तो अवस्थामा भविष्यमा फेरि यस्तो छैन।
अन्य देखि दबाब आफ्नो विचार दिन छैन अप
तपाईं एक सफल व्यक्ति बन्न चाहनुहुन्छ भने केही बिन्दुमा तपाईं rigidity कायम छ। यदि अन्य मानिसहरूलाई आफ्नो विचार वा निर्णय सहमत छैन, यो तिनीहरूले सही होइन। आफ्नै अंतर्ज्ञान भर, हठी र लगातार हुन।
चर्को बयान नगर्नुहोस्
आफ्नो कार्यहरू शब्दहरू भन्दा धेरै अर्थ। तपाईं पनि आत्म-विश्वस्त आफ्नो बयान मा हुनुहुन्छ भने, तपाईंले बारेमा गलत विचार प्राप्त हुन सक्छ। तपाईँको शब्दहरू अपेक्षित परिणाम देखि diverge हुनेछ घटना मा, मानिसहरू तपाईं विश्वास गुमाउन।
आफ्नो अनुभव चौडा गर्न नडराऊ
पनि Nietzsche कुनै अनन्त तथ्य र निरपेक्ष सत्य हो भन्नुभयो। समय मानवता निरन्तर प्रगति छ, अझै पनि खडा गर्दैन, र विज्ञान केही क्षेत्रमा प्रगति। हरेक बौद्धिक मानिस आफ्नै अनुभव र आफ्नो ज्ञान को सीमाहरु विस्तार गर्न खोज्ने। सही डाटा सजिलै दस वा बीस वर्ष मा refuted गर्न सकिन्छ भनेर थाह छ।
कसरी सबै र चिल्ला बारेमा रो रोक्न?
सोच को विकार के हुन्? लाग्यो विकार: कारण, लक्षण, वर्गीकरण
संज्ञानात्मक प्रक्रियाहरु: विवरण र विकास
अनुभवहीन - कि अपमान वा भावना?
कसरी डर र चिन्ता को हटाउनु, त्यसैले बाँच्न हामीलाई hindering गर्न?
"Gabantin 300": निर्देश पुस्तिका (समीक्षा)
एलईडी ट्यूब - आधारभूत गुणहरू, स्थापना र लाभ
Dombay, "महान् होटल": एक सिंहावलोकन, वर्णन र समीक्षा
किशोरीहरूको 15-16 वर्षसम्म भिटामिन। के भिटामिन किशोर पिउने
को "Maynkraft" मा तैयार फ्रेम रूपमा - चरण पुस्तिका द्वारा चरण
नङ डिजाइन सेल: सुविधा र फोटो
अनाज सूप - स्वादिष्ट र स्वस्थ
समूह "Pompey": सिर्जना र संरचना को इतिहास
Cirrhosis अन्तिम चरण। यो अवस्था कसरी रोक्न।
Deniel Redklif: जीवनी र काम